बधाई ! नेपालमा आज एकैदिन ८८४८ जना को’रोनामुक्त, कति थपिए संक्र-मित ?(संख्या सहित)
काठमाडौं : नेपालमा पछिलो २४ घन्टामा थप ८९८० जनालाई संक्रम’ण पु’ष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पी’सीआर बिधि र एन्टी’जेनविधिबाट
गरिएको परिक्षणमा ८९८० जनालाई को’रोना पुष्टि भएको हो ।
आज थपिएका सहित अहिलेसम्म नेपालमा ५ लाख १० हजार ८६ जनालाई संक्र’मण पु’ष्टि भएको छ ।त्यस्तै नेपालमा को’रोना संक्रमि’त नि’को हुने क्रम ह्वातै बढेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार ८४८ संक्र’मित नि’को भएका छन् । एकैदिन संक्र’मणमु’क्त भएका सं’क्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो । योसँगै सं’क्रम’णमुक्त हुनेको संख्या ३ लाख ८३ हजार ६८४ पुगेको छ यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर भने १२९ संक्रमि’तको मृ’त्यु भएको छ ।
यस संगै को’रोनाबाट ज्या’न गु’माउनेको संख्या ६१५३ पुगेको छ ।अहिले १ लाख १५ हजार ८०६ जना संक्र’मित आ’इसोलेसनमा छन् ।
त्यस्तै को’रोना संक्र’मणबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखाका प्रबन्धक रविन्द्र मण्डलको शनिबार बिहान ९ः०० बजे नि’धन भएको छ । धनुषा जिल्ला वि’धेह नगरपालिका वडा नं ५ मुडिया घर भएका प्रब’न्धक मण्डल बिगत ४ बर्ष देखी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखामा कार्यरत रहेका थिए ।
रामेछापमा को’रोना सङ्क्र’मण भै आफ्नै जिल्ला धनुषाको जनकपुर स्थित जानकी हे’ल्थ कि’यरमा उपचारका क्रममा मण्डलको आज ९ः०० बजे नि’धन भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखाका बरिष्ठ सहायक सुदर्शन पौडेलले जानकारी
दिए ।मण्डल विगत ४ वर्षदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखामा शाखा प्रबन्धकमा कार्यरत रहेका थिए ।स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका जनस्वास्थ्य अधि’कृत भुवन थापाका
अनुसार मण्डललाई वैशाख २५ गते ए’न्टिजेन्ट परी’क्षण गर्दा को’रोना सङ्क्र’मण पु’ष्टि भएको थियो । को’रोना सङ्क्र’मपछि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि थप उपचारका लागि परिवारले गृह जिल्ला धनुषा लगेका थिए ।
२०७८ जेष्ठ ८, शनिबार १७:५७ गते 1 Minute 797 Views
यिनै हुन् बुद्ध एयरको जहाजलाई ठुलो दु’र्घ’टनाबाट जोगाएर ७७ जनाको ज्यान बचाउने क्याप्टेन आङगेलु शेर्पा ।
ब्रेकिङ – रुपा सुनार प्रक-रण : जातीय वि’भेद भएको भन्दै घरबेटीलाई धरौ’टी तिर्न अदालतको आदेश !